पर्थविरुद्ध आज कस्तो रह्यो सन्दीपको दोस्रो ओभर? » Onlycricnepal
Home/T10/पर्थविरुद्ध आज कस्तो रह्यो सन्दीपको दोस्रो ओभर?
पर्थविरुद्ध आज कस्तो रह्यो सन्दीपको दोस्रो ओभर?
४ माघ २०७६, शनिबार ०७:१२
काठमाडौंः अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल) अन्तर्गत पर्थ स्कोरर्चर्स विरुद्धको खेलमा मेलबर्न स्टार्समा आवद्ध सन्दीप लामिछानेले दोस्रो ओभरमा ९ रन दिएका छन् । उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा एक चौकासहित बिनाविकेट ९ रन दिएका हुन् ।
सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमा विकेटसहित ६ रन दिएका थिए । सन्दीपले पहिलो विकेटका रुपमा आफ्नो पहिलो ओभरको चौथो बलमा लायम लिभिङस्टोनलाई १८ रनमा आउट गर्न सफल भए । उनले २ ओभरमा २ विकेट लिएर १५ रन दिएका छन् ।
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मेलबर्नले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १ सय ४१ रन बनायो । उसका लागि ओपनर हिल्टन कार्टराइटले अर्धशतक बनाए । उनले ५६ बलमा ७ चौका प्रहार गर्दै अविजित ५८ रन बनाए । यस्तै कप्तान ग्लेन म्याक्सवेलले २५, निक लार्किनले २४ रनको योगदान दिए । आज मेलबर्नका अन्य खेलाडीले भने दोहोरो अंकमा समेत रन बनाउन सकेनन् । बलिङमा पर्थका म्याथ्यू केलीले ३, झाय रिचर्डसन र फवाद अहमदले एक–एक विकेट लिए ।
अष्ट्रेलियाविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले टस जित्यो, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १२:२४
सीपीएल : पोलार्डको टिमविरुद्ध जमैका पराजित, सन्दीपलाई आज पनि सफलता
५ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०७:४२
कस्तो रहला बुमराहको ‘कमब्याक’?
बिग बास लिगः डिभिलियर्स र राशिद खानको टिम भिड्दै (सम्पूर्ण जानकारी)
२९ पुष २०७६, मंगलवार ०२:०८